Taxanaha Buugga: "Halbeeg Hirdanka Fikradaha iyo Habraaca Fahamka" (Q. 4aad)
Sunday May 13, 2018 - 12:06:18 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
MA TAHAY MUSLIM QUNYARSOCOD AH? Hordhac
Muslimnimada toosan, Halbeegga Xarunta RAND!
Xarunta CIlmibaadhista iyo Horumarinta ee "RAND” (Research and Development Corporation), ayaa soo saartay sannadkii 2007, diraaso ay ugu magac dartay: (Building Moderate Muslim networks).
Daraasaddan "Dhisidda shabakado isku xidha Muslimiinta qunyarsocodka ah”, waxa lagu lafa guray laguna qiimaynayay dhammaan ururrada diimeed ee ka dhex jira muslimiinta, waxa si gaar ah loo beegsaday kuwa u dhaqdhaqaaqa dib u falgelinta ku dhaqanka Islaamka, si uu u noqdo habraaca nololeed ee qofka Muslimka ah.
Intaa laguma dhaafin kala saaridda Muslimka soo dhoweynta mudan iyo midka in la duugo mudan, ee waxa daraasadda dhexdeeda lagu xusay astaamo aad u badan oo lagu kala teedi karo labadaa qolo, ee horgalaha magaca "Muslim” wadaaga, hase yeeshee ku kala duwan Qunyarsocod iyo Xagjir.
MUSLIM QUNYARSOCOD AH (1)
MUSLIM XAGJIR AH (2)
Ku dhaqanka shareecada
Isku badhxidda shareecada iyo qawaaniinta kale
Wuu taageersan yahay, waxana uu qabaa in wax badan laga soo qaato qawaaniinta adduunka, qaybo shareecada ka mid ah na laga tago
Muxuu ka qabaa dhaqdhaqaaqa dib u qaabeynta Islaamka iyo cusboonaysiinta fahamka diinta
Wuu soo dhoweynayaa si ilbaxnimada Reer Galbeedka loo waafajiyo
Ma oggola in shareecada wax laga beddelo.
Jihaadka Alle dartii loo dagaallamo
Ma aaminsana, mana oggola
Wax ka sheegidda diinta Islaamka
Waxba kama qabo, waayo? waxa uu aaminsan yahay xorriyada wax sheegidda
Ma aqbali karo in Islaamka la duro oo wax laga sheego
In qofka lagu ciqaabo wax ka sheegga diinta, laguna fuliyo xadka riddada
Wuu ka dagaallamaa oo wuu diiddan yahay.
Wuu waafaqsan yahay oo doonayaa.
Siduu u arkaa wax ka sheegidda Nebi Muxammed
Dhib uma arko, waayo? waxa uu aaminsan yahay xorriyadda hadalka.
Aad buu uga cadhoodaa oo uga dagaallamaa.
Axaadiista Nebiga .
Qiimo badan uguma fadhido
Aad buu u tixgeliyaa una aaminsan yahay.
Muxuu ka qabaa Suufinnimada, booqashada qubuuraha, iyo in caqliga loo celiyo dhammaan arrimaha diiniga ah?.
Muxuu ka qabaa qaddiyadda sinnaanta ragga iyo dumarka?
Wuxuu aaminsan yahay in ay siman yihiin, si waafaqsan aragtida Reer Galbeedka.
Wuxuu rummaysan yahay in loo maro sida shareecadu u dhigtay.
Xorriyadda caqiidada, qofku in uu diinta Islaamka ka baxo oo uu diinta uu doono geli karo.
Xuquuqda Aadanaha ee caalamiga ah, oo ay ka mid tahay in uu qofku guursan karo mid jinsigiisa ah
Wuu taageersan yahay, waayo waxa uu aaminsan yahay in uu qofku doorashadiisa u madax bannaan yahay.
Ma oggola waxa aanu u arkaa diin la’aan iyo xawayaannimo.
Dagaalka argagixisada lagula jiro muxuu ka rumaysan yahay
Wuu ka soo horjeedaa, waxa aanu aaminsan yahay in uu yahay dagaal Islaamka lagu hayo.
In ay gabadhu saaxiib sameysato aan ninkeeda ahayn
Wuu taageersan yahay, waxa aannu u arkaa in ay xaq u leedahay cidda ay dooranayso
Aad buu uga soo horjeedaa waxa aanu u arkaa in ay sino xaaraan ah tahay.